Ubaxa Arooska, Pink Rose, Red Rose, Qurxinta Ubaxa - Runya
Waxaan ka shaqaynaynay ubax macmal ah in ka badan 18 sano. Tayada sare waa diiradda kaliya ee aan fiiro gaar ah siinno. Xirxirida waxay noqon doontaa 3 lakab sanduuq gudaha ah oo jiingad ah iyo 5 lakab oo kartoon dibadda ah.
Waxaan siin karnaa muunad bilaash ah macaamiisheenna, annaga oo la wadna lacag -qaadaha. Haddii ka badan 3 gogo 'waxaad u baahan tahay inaad marka hore bixiso. Dhammaan kharashyada, waa laga jari karaa marka aad nala soo dalbato ganacsi.
Qurxinta Guriga Bannaanka Bannaanka Cawska Astro Turf ...
Qurxinta Kirismaska ​​Qurxinta Kirismaska ​​Santa ...
Toos Uga Socda Warshadda Shiinaha Garland Ubax for Ch ...
Toos Uga Socda Warshadda Shiinaha Garland ee Kirismaska ​​...
Ubaxyada Kirismaska ​​ee Qurxinta Kirismaska
Qurxinta Kirismaska ​​ee Tayada Sare leh Farshaxanka Quruxda badan ...
Ubaxa Artificial Single Chrysanthemum Single S ...
Style qalalan Artificial Rose Ubaxa Silk Rose
Ubaxa Artificial Chrysanthemum Ubax Keliya
Ubaxa Artificial Galsang Ubax Keliya
Tianjin Runya Science Technology Development Co., Ltd. waxay ku takhasustay horumarinta, soo saaridda iyo suuqgeynta sahayda guriga, sida ubaxa macmalka ah, cawska macmalka ah, ubaxyada iyo dhirta la qalajiyey, qurxinta kirismaska, qurxinta guriga iwm. Diiradeena mar walba waxay ku jirtaa qurxinta meelahaaga. Alaabooyinkayagu waxay ku raaxeysanayaan sumcad wanaagsan suuqyada adduunka oo dhan, sida Yurub, Mareykanka iyo Aasiya…